Shirweyne qaran oo maanta ka furmay Muqdisho (Maxaa looga hadlay?) - Caasimada Online
Home Warar Shirweyne qaran oo maanta ka furmay Muqdisho (Maxaa looga hadlay?)
Shirweyne qaran oo maanta ka furmay Muqdisho (Maxaa looga hadlay?)
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shir weyne looga hadlaayay arrimo dhowr ah oo ay kamid tahay is dhexgalka bulshada.
Shirka ayaa waxaa soo qabanqaabisay Wasaarada Shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya, waxaana lala kaashtay Taliska Ciidamada AMISOM ee magaalada Muqdisho.
Shirka ayaa waxaa sidoo kale diirada lagu saarayaa Cirib tirka saboolnimada iyo sidii xuquuqdooda loo ilaalin lahaa dadka la heyb sooco.
Mas’uuliyiinta shirka ka qeybgashay ayaa waxaa kamid ahaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan ‘Jawaari’, Mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, Guddiga arrrimaha Bulshada Baarlamaanka, xubno ka socday AMISOM iyo marti sharaf kale.
Jawaari oo ka hadlay shirka ayaa sheegay in Somalia ay kasoo kabaneyso dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin Abaaraha, Cudurada, Dagalada Sokeeye iyo midib takoorka.
Jawaari waxa uu sheegay in dhibaatooyinkaasi dhammaantooda ay sabab u tahay Jaahilnilnimada, loona baahan yahay in lagu dadaalo sidiii looga gudbi lahaa.
Waxaa sidoo kale Shirka ka hadashay Lydia Wanyoto oo ah ku-xigeenka Midowga Afrika ee AMISOM kuna magac dheer ‘Luul’ waxa ayna sheegtay in Somalia ay ka si dhamaaneyso faquuqa dadka laheeb soocoso, iyadoo intaa ku dartay in loo baahan yahay in dhexda loo guntado ciribtirka saboolnimada.
Dhinaca kale, shirka ayaa socon doona muddo 3 maalin ah, waxaana madasha ku sugan dhammaan Hay’adaha ka shaqeeya Arrimaha Bulshada.